Farmaajo oo kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Farmaajo oo kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya
Farmaajo oo kulan la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis-ababa ayaa kulan doceed kula qaatay Ra’iisul Wasaaraha dib loo doortay ee dalka Itoobiya Mudane Abiy Axmed.
Kulanka ayaa waxaa ay iska xog wareysteen xaaladda Gobolka Geeska Afrika iyo xiriirka labo geesoodka ah ee labada dal oo ay saldhig u tahay daris wanaag, isixtiraam iyo xoojinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uga mahad celiyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu uga qeyb galay Xafladda Caleema saarka Xukuumaddiisa Cusub, isaga oo sheegay in dowladda Soomaaliya uu ka taageeri doono dhonacyo dhowr ah.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Saddexdii sano ee la soo dhaafay waxaa uu saaxiib gaar ah la lahaa Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, isaga oo mark kusoo dhaweeyay Magaalada Muqdisho, isla markaana dhowr jeer ay ku kulmeen Magaalada Addis Asmara ee waddanka Ereteriya.
Previous articleQaramada Midoobay oo War kasoo saartay dadka sida qasabka ah looga musaafuriyay laas-Caanood
Next articleKoox: hubeysan oo saaka dil ka geystay magaalada Muqdisho